» ब्याटल राउण्डमा को भन्दा को कम ? भाग–६ (भिडियो)
ब्याटल राउण्डमा को भन्दा को कम ? भाग–६ (भिडियो)
३० आश्विन २०७६, बिहीबार ०७:२१
मकवानपुर, ३० असोज । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो ‘द भ्वाईस अफ नेपाल’ को सिजन २ मा अहिले ब्याटल राउण्ड चलिरहेको छ । डिजिटल अडिसन हुँदै ब्लाईन्ड अडिसनबाट छनौट भएका ६४ जना प्रतियोगीहरुले अहिले ब्याटलमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यस भिडियो सिरिजको छैटौँ भागमा हामीले ब्याटल राउण्डको छैटौँ एपिसोडमा कसले कस्तो गाए ? अनि को बाहिरिए र को सेलेक्ट भए ? यसका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । भ्वाईस अफ नेपालका बारेमा अन्य भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानलका थप भिडियोहरु हेर्नुहोला । हेर्नुहोस् भिडियो–
शनिबार भएको पहिलो ब्याटलमा टिम प्रमोदबाट साजन लामा र मधु लामाले प्रतिस्पर्धा गरे । ‘हंगामा भो’ बोलको गीतमा प्रतिस्पर्धा गरेका उनीहरुमध्ये मधु नकआउटका लागि छनौट भए भने साजन बाहिरिए । दुबैको गायिकीलाई सबैले मन पराए । दमदार प्रस्तुति दिएकै कारण कोच प्रमोदले दुबै प्रतिभालाई भ्वाईसको मञ्चबाट बिदा गर्ने सोच राखेनन् । उनले भ्वाईस अफ नेपालको ईतिहासमा नै पहिलो पटक ‘डुओ’ को लागि साजन र मधुलाई अफर गरे । डुओमा दुबै सहमत भएमा दुबैले एकै प्रतिस्पर्धीका रुपमा युगल जोडी भएर नकआउटका लागि भिड्न सक्थे र अन्तिमसम्मै अघि बढ्ने मौका पाउने थिए । तर नाताले साजको ज्वाई बताएता पनि मधुले डुओका लागि सहमति जनाएनन् । यता साजनले भने आफन्त भएको भन्दै डुओमा एकै भएर अगाडि बढ्न सहमति जनाएका थिए । डुओमा सहमति नजुटेपछि कोच प्रमोदले एड्भाईजरको सल्लाहमा मधुलाई अघि बढाएका हुन् । प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएपनि निकै राम्रो गाएका साजनलाई कोच राजु र दिपले स्टिल गरेनन् । उनी भावुक हुँदे शोबाट बाहिरिए । मधु र साजनको ब्याटल भ्वाईस अफ नेपालको सिजन २ मा सबैभन्दा दमदार ब्याटलका रुपमा लिइएको छ । यो ब्याटललाई कोच दिपले ह्याट्सअप समेत दिएका थिए । मधुले डुओको लागि अस्विकार गरेको भन्दै दर्शकहरुले समेत विरोधमा कमेन्ट गरेका छन् । तर प्रतियोगिताका भएका कारण यसलाई सामान्य रुपमा लिन पनि धेरैले आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै दोस्रो ब्याटलमा टिम दिपबाट मकवानपुरकी निर्मला घिसिङ र कपिलवस्तुकी शिवा गिरीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ‘आज तिम्रो कुरा चल्यो’ बोलको गीतमा प्रतिस्पर्धा गरेका उनीहरुमध्ये निर्मला नकआउटका लागि छनौट भएकी छिन् । निकै नै सुमधुर आवाज भएकी शिवा ब्याटलबाट बाहिरिईन् ।
ब्याटलको छैटौँ एपिसोडको तेस्रो ब्याटलमा टिम राजुबाट अञ्जु राना मगर र सृष्टि सुनारले प्रतिस्पर्धा गरेकी थिईन् । ‘रेलैमा’ बोलको गीतमा भएको यो ब्याटलमा अञ्जुले बाजी मार्दै नकआउटका लागि छनौट भईन् । उत्तिकै दमदार आवाज भएकी सृष्टिले पनि निकै दमदार प्रस्तुति दिईन् । उनीहरु दुबैको ब्याटल निकै रोमाञ्चक समेत भएको थियो । त्यस्तै यस एपिसोडको अन्तिम ब्याटल टिम आस्थाबाट आरिफ रौफ र सुरजराज खत्रीबिच भएको थियो । ‘समय पन्छी हो’ बोलको गीतमा भएको यस ब्याटलमा आरिफले बाजी मारेर नकआउटका लागि छनौट भए । यता सुरजले पनि सुमधुर आवाजका साथमा निकै दमदार प्रस्तुति दिए । आदरणीय दर्शविन्द यी प्रतियोगीहरुमध्ये तपाईलाई कसको आवाज मनपर्छ ? तपाईको विचारमा फाईनलसम्म कुन प्रतियोगीहरु पुग्न सक्छन् ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।